Tonizia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Africa » Tonizia
Tonizia. Fampahalalana ankapobeny
Fampahalalana ankapobeny momba an'i Tonizia
Any Tonizia, ny tena mahasarika mpizahatany dia ny morontsirak'i Mediterane sy ny tantara manankarena. Na dia manjaka eto amin'ity firenena ity ny finoana Silamo, dia fanjakana manana fomba fiaina tsy dia lavitra loatra i Tonizia amin'ny ankapobeny. Any amin'ny toerana fizahan-tany dia azo amidy ny zava-pisotro misy alikaola. Tsy misy olana mihitsy amin'ny hotely misy alikaola. Ny ankamaroan'ny hotely dia manana faritra manokana misy morontsiraka, trano fisakafoanana, dobo filomanosana, fisotroana ary fialamboly isan-karazany. Marina, sarotra ny mahita fialamboly ivelan'ny faritry ny hotely. Ny hetsiky ny mpizaha tany any Tonizia ivelan'ny hotely dia ny fitsangatsanganana an-toerana sy ny fiantsenana mahafinaritra. Saingy ny trano fandraisam-bahiny sy faritra fialan-tsasatra dia manolotra ny zava-drehetra ho an'ny vahiny vahiny, ao anatin'izany ny fiainana alina.
Any Tonizia, afaka mitaingina catamaran ianao, manao ski ambony rano, snorkeling ary surf, mandray anjara amin'ny fitsangatsanganana mahafinaritra, milalao golf. Ny fomba fitsaboana thalassotherapy dia malaza indrindra - ny fitsaboana sy ny fisorohana ny aretina amin'ny alàlan'ny toetr'andro, ny filentehan'ny masoandro ary ny filomanosana. Manampy amin'ny famelomana ny vatana, mampihena ny lanjan'ny vatana, manamaivana ny adin-tsaina, manatsara ny metabolisma.
Ny Toniziana dia sariaka amin'ny mpizahatany. Fa mendrika ny handinika tsara ny mampiavaka ny kolontsaina ao an-toerana. Ohatra, ny mandeha any amin'ny fivarotana kely na hotely, dia tena maniry ny hanao veloma.
Loza any Tonizia
Eo ivelan'ny faritra amin'ny trano fandraisam-bahiny dia tsy tokony handeha miaraka amin'ny soroka matevina sy amin'ny zipo fohy (indrindra eto an-drenivohitra). Ny lalàna any an-toerana mandrara ny fakana sary ny lapam-panjakana. Ao anatin'ny faritra misy ny trano fandraisam-bahiny dia afaka mitafy araka izay tianao ianao. Rehefa mitsidika tranonkala ara-pivavahana, soroka sy lohalika dia tsy maintsy rakotra. Nandehandeha nanodidina ny tanàna, ny olona dia tsy tokony hijery akaiky ny vehivavy ao anaty voaly, ary koa ny olona mihinana (any amin'ny toeram-piomanana fikarakarana sakafo). Ny fihinana eny an-dalana na mijanona ao Tonizia dia heverina ho ratsy toetra ihany koa.
Tsy ilaina ny fanaovana vaksiny alohan'ny hitsidihana ity firenena ity. Ilaina anefa ny manamarina raha toa ka voan'ny vaksiny ny rivo-mahery, tetanus ary dipteria taloha. Tsy azo inoana ny misotro rano amin'ny famatsian-drano. Ilaina ny mividy rano fisotro any an-fivarotana, ankoatra izany, tsy lafo eto (eo ho eo amin'ny 0,5 dinar isaky ny tavoahangy misy rano 1,5 litatra).
Ny zavatra manan-danja indrindra dia tokony hotehirizina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny hotely. Rehefa mividy vola any an-tsena na eny amin'ny fivarotana kely ianao dia tokony isaina foana ilay fanovana, satria matetika dia very. Amin'ny fitateram-bahoaka sy any amin'ny toerana malaza indrindra amin'ny mpizaha tany dia misy pickpules sy mpamadika olona marobe. Ny polisy eo an-toerana dia manao fitsaboana tsara ny mpizahatany.
Vola, banky, karatra, fifanakalozana fifanakalozana vola any Tonizia
Ny vola nasionalin'i Tonizia dia ny Dinar Toniziana. Fanendrena iraisam-pirenena - TND.
1 Darar dia mizara ho 1 milimetatra. Androany mivezivezy ihany dia misy antokom-pinoana amin'ny fisakafoanana dinara 000, 5, 10, 20 ary 30 miaraka amin'ny anaram-boninahitra 50, 5, 10, 20 ary 50 milimetatra, ary koa ny 100/1, 2 ary 1 ny fisakafoanana.
Ao amin'ny basy sy amin'ny fivarotana kely, ankoatra ny hisakafoanana, matetika dia manaiky an-tsitrapo dolara sy Euros izy ireo handoavana vola. Na izany aza, amin'ity tranga ity, ny vidin'ny sakafo amin'ny dinars dia averina amin'ny tahan'ny tsy mahomby.
Ny fifanakalozam-bola dia tanterahina amin'ny banky, birao fifanakalozana tsirairay, seranam-piaramanidina ary hotely. Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy dikany ny fahasamihafana eo amin'ny taha amin'ny birao fifanakalozana. Ny taha mahasoa indrindra dia amin'ny hotely.
Ireo karatra banky eto amin'ity firenena ity dia ekena amin'ny saika fivarotana rehetra (ankoatra ireo fivarotana kely), trano fisakafoanana ary hotely. Any amin'ny faritra misy ny mpizahantany dia maro ireo ATM. Rehefa mampandoa vola ao aminy, ny vaomiera momba ny dinika 1,5-2 dia omena ho fanampin'ny saram-panjakàna. Amin'ny ankapobeny, any Tonizia dia mahasoa kokoa ny fifanakalozana fifanakalozana dolara nentina miaraka aminao fa tsy ny vola amin'ny karatry ny banky.
Voarara ny manondrana vola any Tonizia amin'ny vola rehetra (na vola madinika kely indrindra aza).
Ny dolara sy ny vola hafa any Tonizia
Toetany sy toetrandro any Tonizia
Ny toetr'i Tonizia dia misy akony lehibe amin'ny Ranomasina Mediteraneana sy ny Sahara. Any amin'ny faritra avaratry ny firenena, manjaka ny karazan-toetr'andro any Mediterane subtropika, any amin'ny faritra afovoany sy atsimo - tropikaly efitra.
Eto amin'ity firenena ity, mahazo aina ny toetrandro mandavantaona. Amin'ny fahavaratra, matetika ny mari-pana dia eo amin'ny + 25 ... + 32, amin'ny ririnina - eo amin'ny + 8 ... + 12. Akaiky ny ranomasina dia mora kokoa ny mitondra ny hafanan'ny fahavaratra noho ny fitsokan'ny rivotra. Afaka milomano ianao manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Septambra. Ny rotsak'orana dia miseho amin'ny ririnina. Ny ankamaroan'izy ireo dia latsaka any an-tendrombohitra, raha any amin'ny faritra efitra kosa matetika dia tsy eo mandritra ny taona maro.
Ny fe-potoana tsara indrindra amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina any Tonizia dia ny aprily ka hatramin'ny jona ary hatramin'ny septambra ka hatramin'ny oktobra. Ny mari-pana ny rivotra mandritra ireo volana ireo dia manana sanda +25 eo ho eo. Manomboka amin'ny Jolay ka hatramin'ny Aogositra dia mafana loatra eto satria ny rivotra mitsoka avy any Sahara ary mitondra hafanana avy any. Vokatr'izany dia mety mihoatra ny +40 aza ny mari-pana.
Ny andro ankehitriny any Tonizia
Fitateram-bahoaka any Tonizia
Ny fitateram-bahoaka iraisana eto amin'ity firenena ity dia misy bus sy tram, ary koa, taxi, mazava ho azy. Ny fitaterana fiaraha-monina any Tonizia dia misy fiaran-dalamby, bisy, taxi-be iraisam-pirenena, ary koa fiaramanidina anatiny.
Misy zotram-by 8 haingam-pandeha haingam-pandeha ary lalana manodidina ny 30 eo ho eo eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Vidy mora ihany - 580 milimetatra ho an'ny olon-dehibe ary 230 milimetatra ho an'ny ankizy. Azonao atao ny mividy karatra fitsangatsanganana mandritra ny 2 herinandro amin'ny vidiny 2,55 ka hatramin'ny 4,55 dinar. Ankoatr'izay, ny eto an-drenivohitra dia manana metro hazavana, izay tendren'ny fanafohezana TGM.
Amin'ny fiaran-dalamby any Tonizia, afaka mahazo miala sasatra hatrany amin'ny tanàna iray mankany amin'ny tanàna hafa ianao, mijery ireo toerana sy toerana mahasarika eny an-dalana. Ny tambazotra lalamby ao amin'ity firenena ity dia mivoatra tsara ary mandrakotra ny toerana rehetra mihaona na tsy dia malaza amin'ny mpizaha tany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, nohavaozina ny tahiry roll. Ny ankamaroan'ny fiaran-dalamby dia manana seza malefaka sy fampandriana rivotra.
Misy seranam-piaramanidina iraisampirenena 4 any Tonizia - Tunis-Carthage, Enfida-Hammamet, Monastir (nomena anarana taorian'ny H. Bourguiba) ary Djerba-Zarzis. Samy manidina sidina iraisam-pirenena sy an-toerana izy ireo. Tsy misy afa-tsy zotram-piaramanidina miisa 3 miasa eto amin'ity firenena ity dia ny Tunis Air, Sfax Airlines ary Tunis Air Express.
Misy karazana taxis telo any Tonizia:
Ny minibus intercity dia voamarika amin'ny tsipika mena ary manelanelana ny dia eo anelanelan'ny tanàna. Any amin'ny tanàn-dehibe dia misy fijanonana ho an'ireo taxi ireo, izay eo akaikin'ny gara sy ny kianja lehibe. Niainga ny taxi-be toy izany taorian'ny fisamborana mpandeha marobe. Alohan'izany dia resahina ny vidin'ny dia.
Ny minibus intra-city misy tadiny manga dia fiara misy seza mpandeha dimy izay tsy manana fandaharam-potoana voafetra ary miala rehefa feno ny mpandeha avokoa ny seza.
Taxi tenany mihitsy no fiara mavo. Afaka miantso an-telefaona ianao, afaka "misambotra" eny an-dalambe koa. Ny fandoavana dia atao amin'ny alàlan'ny kaontera amin'ny faran'ny dia. Amin'ny alina (manomboka amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 5 maraina), dia avo roa heny ny taha.
Fiantsenana ao Tonizia
Mpivarotra Toniziana dia manolotra vokatra maro mahavariana. Anisan'ireny, ny famokarana eo an-toerana no tsara indrindra. Ny fivarotana Toniziana, ny fivarotana, ny toeram-pivarotana sy ny tsena dia ahafahana mividy tanteraka ny zavatra rehetra, manomboka amin'ny entana ilaina isan'andro, miafara amin'ny vokatra souvenir. Misy entana marika eto, na izany aza, ny vidin'izy ireo dia tsy ambany noho ny any Eropa, ary amidy manokana amin'ny renivohitra ihany, izay antsoina hoe Tonizia, toa ny firenena ihany koa.
Avy amin'ny fahatsiarovana dia mendrika tokoa ny mividy karipetra, manenjika entana, seramika, farango ary entana vita amin'ny hoditra. Tsara homarihina koa ny firavaka sy ny zava-manitra. Ny karipetra avo lenta voalohany dia hita amidy amin'ny tanàna rehetra any Tonizia, fa ny ivon'ny fanenomana karipetra dia Kairouan.
Tena ilaina ny vokatra vita avy amin'ny hoditra eo an-toerana noho ny asa manara-penitra kalitao ananany. Azonao atao ny mividy entana vita amin'ny hoditra any amin'ny fivarotana sy trano fitrandrahana, ary any amin'ny tranobain-dry zareo dia mora vidy kokoa, na dia misy risika lehibe amin'ny fahazoana entana sandoka na ambany aza tsy mifanaraka amin'ny vidiny. Noho izany dia tsara kokoa ny mividy vokatra vita amin'ny hoditra any amin'ny magazay manokana. Manome antoka ho an'ny kalitao izy ireo. Ny safidin'ny vokatra vita amin'ny hoditra dia lehibe: kitapo amin'ny karazany, habe ary alokaloka, kapa, fehikibo, valizy, akanjo. Manomboka eo amin'ny $ 40 ny vidin'ny kitapo vita amin'ny hoditra;
Tonizia koa dia manana safidia hookah be dia be. Amidy eny rehetra eny ireo vokatra ireo amin'ny loko, habe ary endrika maro karazana. Alohan'ny hividianana dia tokony hazavainao raha toa ny haingon-trano fotsiny ny hookah tianao (misy ny sasany) - amin'ity tranga ity dia tsy ho azo atao ny mampiasa azy amin'ny tanjona kendreny. Ny sigara Hookah dia azo vidiana eo noho eo amin'ny fividianana ilay fitaovana mihitsy.
Ireo fivarotana lehibe fivarotana lehibe General sy Monoprix dia miasa any amin'ny tanànan'ny mpizahatany, mivarotra entana marobe, manomboka amin'ny vokatra sakafo ka hatramin'ny akanjo. Malaza kokoa amin'ny mpizahatany ny jeneraly, satria mivarotra zava-pisotro mahery ireto fivarotana lehibe ireto, tsy toa an'i Monoprix. Ny ora fisokafan'ny fivarotana an'ireo rojo ireo dia miankina amin'ny vanim-potoana. Amin'ny ririnina dia misokatra izy ireo manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 13 ary avy eo amin'ny 16 ka hatramin'ny 18.45, ary amin'ny fahavaratra dia misokatra amin'ny 7.30 izy ireo ary manakaiky ny 15. Ao an-drenivohitry ny firenena - Tonizia, misy fivarotana lehibe lehibe iray, izay antsoina koa hoe Tunis, ary manolotra karazan-tsakafo sy vokatra tsy fihinana isan-karazany.